Association of Youth Organizations Nepal (AYON) » NYA 18-point Declaration (Nepali)
NYA 18-point Declaration (Nepali)
राष्ट्रिय युवा सम्मेलन २०७३ — युवा घोषणा पत्र
१४ जेष्ठ २०७३ (शुक्रबार)
नेपालको इतिहासमा हालसम्म भएका सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक परिवर्तनको अगुवाइ नेपाली युवाले गरेको दाबी दोहो-याउँदै,
वि.सं. २०७२ सालको जनधनमा ठूलो असर पार्ने गरी गएको भूकम्पपश्चात् उद्धार, राहत तथा पुर्नलाभमा युवाको नेतृत्वदायी भूमिकालाई प्रशंसा एवं संस्मरण गर्दै,
युवा र सुरक्षासम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघको प्रस्ताव पत्र नं. २२५० एवं युवालाई प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने दीगो विकास लक्ष्यका लक्ष्यहरूलाई राष्ट्रिय तथा स्थानीय तहमा प्रचार–प्रसार र कार्यान्वयनका पक्षमा जोड दिँदै,
लामो प्रयत्नपश्चात् वि.सं. २०७३ असोज ३ मा घोषित संविधान र त्यसको बृहत् अपनत्व एवं समावेशीकरणका लागि थप आवश्यक सम्बोधन गर्नुपर्ने पक्षमा जोड दिँदै,
राष्ट्रिय युवा नीति, २०७२, युथ भिजन – २०२५, राष्ट्रिय युवा परिषद् गठन ऐन, २०७२ लगायतका युवाका नीतिगत व्यवस्थाहरू तयार भएकोमा कार्यान्वयन पक्षलाई जोड दिँदै,
सामाजिक, आर्थिक, सास्ंकृतिक रूपान्तरण सहितको शान्त, समृद्ध र न्यायपूर्ण नेपाल निमार्णका लागि समावेशी राज्य संरचना र सामाजिक न्याय सहितको लोकतन्त्र र राज्य प्रणाली स्थापित गर्न समावेशी पहल र युवाको नेतृत्वदायी सहभागिताको आवश्यकता औंल्याउँदै,
परिवर्तन सम्भव छ, त्यो परिवर्तन हामी युवाबाट मात्र सम्भव छ र हामी महत्वपूर्ण इतिहासलाई निरन्तरता दिने प्रक्रियामा अगाडि बढिरहेका छौँ भन्ने हाम्रो देशप्रतिको दायित्वलाई स्मरण गर्दै,
देशका पचहत्तर जिल्ला, हिमाल, पहाड, तराई÷मधेशबाट राष्ट्रिय युवा सम्मेलनको प्रक्रियामा सहभागी हामी ५०० युवा प्रतिनिधिहरूले यो घोषणापत्र जारी गरेका छौँ ।
नीतिगत प्रक्रिया प्रतिबद्धता —
१) संविधानसभामार्फत् नयाँ संविधान घोषणा भएको भएता पनि सबै नेपालीको भावना र आकाङ्क्षा समावेश हुन नसक्दा जारी संविधानको अपनत्व कायम हुन सकेको छैन । संविधान कार्यान्वयनमा समस्या सिर्जना भएको वर्तमान अवस्थामा सबै पक्षसँग वार्ता, संवाद र छलफलका माध्यमबाट निकास निकाल्न यो सम्मेलन जोडदार माग गर्दछ । हामी युवा दीगो शान्ति, सद्भाव र अपनत्वसहितको समावेशी संविधानको यात्रालाई सार्थक गन्तव्यमा पु¥याउनको निमित्त आवश्यक पहल, दवाब दिन र कार्य गर्न प्रतिबद्ध छौँ ।
२) गत वर्ष गएको भूकम्पपश्चात् तत्कालको राहत, उद्धार र पुनर्लाभमा युवाहरूले खेलेको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको छ । जनउत्तरदायी र दु्रत गतिमा पुनर्निर्माणको अभावमा एक वर्ष बितिसक्दा पनि भूकम्प प्रभावितहरूका आधारभूत आवश्यकतासमेत परिपूर्ति हुन सकिरहेको छैन । पुनर्निर्माणका नीति तथा सिद्धान्तहरू व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन, जस कारण लाखौँ भूकम्प प्रभावितहरू अझै पनि अस्थायी टहरामा बस्न बाध्य छन् । युवाको नेतृत्वमा जवाफदेहितासहितको पुनर्निर्माणको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा आवाज बुलन्द गर्दै युवाहरू देश निर्माणमा सहभागी रहने प्रतिबद्धता जनाउँछौँ ।
३) राष्ट्रिय युवा नीति, २०७२, युथ भिजन – २०२५, राष्ट्रिय युवा परिषद् गठन ऐन, २०७२ कार्यान्वयनमा आएको अवस्थामा तत्काल आवश्यक स्रोतसाधनसहित तुरुन्त प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनुपर्दछ । युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा युवालाई नै मन्त्री बनाइनु उपयुक्त हुन्छ । युवा परिषद्को गठनलाई केन्द्रमा पूर्णता र स्थानीय तहमा पारदर्शी तरिकाले क्षमतावान्लाई कदर गर्दै यथासक्य विकेन्द्रीकरण गरिनुपर्दछ । युथ भिजन – २०२५ को कार्यान्वयनका लागि आवश्यक स्रोतसाधन र व्यवस्था पनि गरिनु आवश्यक छ । युवासँग सम्बन्धित नीति तथा व्यवस्थाहरूको कार्यान्वयनका लागि युवाको पहिचान, प्रतिनिधित्व र पहुँचसहितको आवश्यक साझेदारी र सहयोग गर्न हामी युवा प्रतिबद्ध छौँ ।
४) नयाँ संविधानले केही अधिकारहरू प्रत्याभूत गरेता पनि युवा दृष्टिकोणबाट हेर्दा कतिपय संवैधानिक निकायमा नियुक्ति गर्दा युवालाई बन्देज लगाइएको हो कि भन्ने परेकोले त्यो सच्याइनु तथा १६ वर्षमा नागरिकता पाउने बित्तिकै मतदानको अधिकार दिइनु उपयुक्त हुन्छ । यसै गरी, वैदेशिक रोजगारीको क्रममा विदेशमा रहेका करिब ४० लाखभन्दा बढी नेपाली युवाको लागि विदेशमै बसेर मतदानको प्रक्रियामा सहभागी गराउन सम्बन्धित निकायहरूलाई आग्रह गर्दछौँ । संविधानको समुचित कार्यान्वयनको लागि आफ्नो रचनात्मक भूमिका निर्वाह गर्न हामी युवा प्रतिबद्ध छौँ ।
कार्यगत प्रक्रियामा प्रतिबद्धता —
१) नीति निर्माण तहमा युवाको प्रभावकारी नेतृत्व र सहभागिताले नै देशको दु्रत गतिमा समृद्धि हुने भएकोले सामाजिक, सास्ंकृतिक र राजनीतिक क्षेत्रमा युवाको सार्थक सहभागिताको सुनिश्चिता गरिनु पर्दछ । हामी युवा नेतृत्व लिन तयार छौँ । युवाको सशक्तीकरणको क्षेत्रमा काम गर्न प्रतिबद्ध छौँ ।
२) युवामैत्री बजेट र विकासका लागि स्थानीय तहदेखि नै निर्णायक प्रक्रियामा युवा सभागिता सुनिश्चित गर्दै युवाको विकासमा मूलप्रवाहीकरण आवश्यक छ । सहभागितामूलक निर्णय प्रक्रिया र युवाको अर्थपूर्ण सहभागिताका लागि अनवरत रूपमा लागिरहन हामी युवा प्रतिबद्ध छौँ ।
संगठित हिंसा, समूहगत हिंसा र अन्य विभिन्न प्रकारका हिंसात्मक व्यवहारबाट युवालाई टाढा रहने वातावरण तयार गरिनुपर्दछ । यस प्रकारका हिंसात्मक क्रियाकलापबाट युवालाई मुक्त गर्न नसक्दासम्म दीगो शान्ति र सद्भाव कायम रहन सक्दैन । हामी युवा सबै प्रकारका संगठित हिंसा, समूहगत अपराध र सबै प्रकारका राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र अपराधजन्य हिंसाको अन्त्यका लागि क्रियाशील रहन प्रतिबद्ध छौँ ।
३) कुनै पनि विभेद र असमानताले समाजको उन्नतिलाई रोक्दछ । न्यायपूर्ण र समतामूलक समाज निमार्णका लागि सबै प्रकारका विभेद, कुरीति (बालविवाह, बहुविवाह, दहेज, लैङ्गिक हिंसा आदि) अन्याय, असमानता र हिंसाको अन्त्यका लागि सामूहिक ऐक्यबद्ध अभियान आवश्यक छ । हामी युवा समाजमा विद्यमान सबै किसिमका असमानता, विभेद, हिंसा र कुरीतिको अन्त्य गर्न प्रतिबद्ध छौँ ।
युवाहरूको मानसिक र यौन तथा प्रजनन् स्वास्थ्य लगायतका सवालहरू व्यक्तिको शारीरिक, मानसिक र समग्र विकासका लागि महत्वपूर्ण विषयहरू हुन् । हामी युवालक्षित कार्यक्रम तय गर्दा युवाको मानसिक स्वास्थ्य, यौन तथा प्रजनन् स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित सवालहरूलाई युवालक्षित कार्यक्रमहरूमा समावेश गर्न प्रतिबद्ध छौँ ।
४) समानुपातिक र समावेशी युवा महिला सहभागिता सुनिश्चित हुनु आवश्यक छ । साथै तेस्रो लिङ्गी, अपाङ्गता भएका युवाको सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्दछ । सबै क्षेत्र, वर्ग, समूहका महिलाहरूको समान नेतृत्व विकासबिना देशको समग्र विकास सम्भव छैन । हामी युवा परिवारदेखि देशको नीति निर्माण तहसम्म समानुपातिक र समावेशी युवा महिला सहभागिताका पक्षमा प्रतिबद्ध छौँ ।
जनसाङ्ख्यिक लाभका रूपमा रहेका युवा जनशक्तिहरूको उत्पादनमूलक काममा लगाउनु आवश्यक छ । जनसाङ्ख्यिक लाभ इतिहासमा एकपटक आउने भएकाले यो नेपालका लागि एउटा महत्वपूर्ण अवसरका रूपमा रहेको छ । यसका लागि राष्ट्रका सबै नीतिहरूले सम्बोधन गर्नु आवश्यक छ । युवा हामी आफै राष्ट्र निर्माणको नेतृत्व लिन र युवालाई सिर्जना र उत्पादनमा सहभागी गर्न र गराउन प्रतिबद्ध छौँ ।
५) रोजगारी युवाको चासो र अधिकारको विषय हो । नयाँ संविधानले रोजगारीको हकलाई मौलिक हकका रूपमा व्यवस्था गरेको छ । युवामा श्रमप्रतिको सम्मानको अभिवृद्धि गर्दै, देश भित्रै युवाका लागि आवश्यक सीप विकास र अर्थाेपार्जनका अवसर सिर्जना गरिनुपर्दछ, जसका लागि जिम्मेवार मन्त्रालय, विभाग र निकायबीच अन्तरसमन्वय आवश्यक छ । शिक्षालाई व्यवहारमुखी, जीवनोपयोगी र व्यवसायिक बनाइनुपर्दछ । हामी युवा श्रमप्रतिको सम्मान अभिवृद्धि गर्दै देशभित्रै अर्थाेपार्जनका नयाँ सम्भावनाको पहिचान र पहिचान भएका क्षेत्रमा काम गर्न प्रतिबद्ध छौँ ।
६) वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित बनाउँदै प्राप्त विप्रेषणलाई अनुत्पादनमूलक कार्यमा नभई दीगो लगानीको आधारको रूपमा प्रयोग गरिनुपर्दछ । वैदेशिक रोजगारीले ल्याउने सामाजिक मूल्यलाई कमी गर्न आवश्यक रणनीति तयार गरिनु आवश्यक छ । ऊर्जाशील युवा जनशक्तिलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउनु तत्कालको विकल्प भए पनि दीगो समाधान होइन । वैदेशिक रोजगारीको लाभलाई अभिवृद्धि गर्दै वैदेशिक रोजगारीले परिवार, समाज र राष्ट्रमा ल्याउने सामाजिक मूल्यहरूलाई कमी गर्न, देशमै युवाका लागि रोजगारी र उद्यमशीलता सिर्जनाका पक्षमा हामी प्रतिबद्ध छौँ ।
७) सूचना–प्रविधिको अधिकतम उपयोगबाट नेपालको विकासलाई तीव्रता दिन सकिन्छ । यसैले सबै युवालाई सूचना–प्रविधिको माध्ययमले जोड्दै युवाको पहुँच अभिवृद्धि गर्नुपर्दछ । सूचना–प्रविधिको क्षेत्रमा युवाहरूकै बाहुल्य छ र यसको बृहत् विकासको लागि हामी युवा प्रतिबद्ध छौँ ।
८) लागु औषध दुव्र्यसन, एच.आई.भी र एड्सजस्ता क्षेत्रमा जोखिममा रहेका युवाको अधिकारलाई सम्मान गर्दै उनीहरूलाई उचित अवसर दिइनुपर्दछ । हामी युवा राष्ट्रिय युवा नीतिमा उल्लेख गरिएअनुसार जोखिममा परेका र जोखिममा पर्न सक्ने युवालाई उचित परामर्श र सहयोग दिन प्रतिबद्ध छौँ ।
९) भूकम्प, बाढी–पहिरो, आगलागीजस्ता प्राकृतिक विपत्तिका कारण प्रत्येक वर्ष देशमा ठूलो धनजनको क्षति हुने गर्दछ । विपत्तिको जोखिम न्यूनीकरण गर्न र विपत्ति आइसकेपछिको प्रभाव कम गर्न तत्काल आवश्यक संयन्त्रको विकास गरिनुपर्दछ । हामी युवा यस्ता विपत्तिको बारेमा आवश्यक जनचेतना जगाउन र विपत्ति परेका बखत स्वयंसेवी भएर नेतृत्व गर्न प्रतिबद्ध छौँ ।
१०) राज्यका विभिन्न पदमा रहेका व्यक्तिहरूलाई जनताप्रति जवाफदेही बनाउनु आवश्यक छ । हामी युवा पारदर्शी र जिम्मेवार प्रशासन यन्त्रको निर्माणमा चेतना अभिवृद्धि गर्न र सहयोग गर्न प्रतिबद्ध छौँ ।
११) व्यक्तिको नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारको सम्मान हुनुपर्दछ । आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्दा अरूको कसैको पनि अधिकार हनन हुनु हुँदैन । कुनै व्यक्तिको व्यक्तिगत स्वतन्त्रता हनन हुने गरी गरिने कुनै पनि क्रियाकलापको विकल्पहरू खोज्नका निम्ति हामी युवाहरू प्रतिबद्ध छौ ।
नेपाल सरकार, राजनीतिक दल, नागरिक समाज, दातृ निकाय, विकास साझेदार र सरोकारवालाहरूले प्राथमिकताका साथ यस प्रतिबद्धता पत्रमा उल्लिखित बुँदाहरूको कार्यान्वयनका लागि पहल गर्न राष्ट्रिय युवा सम्मेलन २०७३ जोडदार माग गर्दछ । यसको कार्यान्वयनको क्रममा आफ्ना जिम्मेवारी पूरा गर्न हामी युवा प्रतिबद्ध छौँ ।
NYA 18-points Declaration (English)